5 Siyaabood oo Fudud oo lagu Hormarin karo Akhriska Boggaaga | Martech Zone
5 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Hagajin Karo Akhriska bartaada
Khamiis, Juun 17, 2008 Friday, May 3, 2013 Douglas Karr
Dadka badankood ma akhri boggaga internetka ee dareenka caadiga ah. Dadku waxay iskaanka sare iyo hoose ka maangaan qoraalada waxayna qabtaan cinwaannada, rasaasta, sawirrada, ereyada muhiimka ah iyo weedho ay isha ku hayaan. Haddii aad jeclaan lahayd inaad hagaajiso habka ay akhristayaashu u cunaan waxyaabahaaga, waxaa jira siyaabo lagu wanaajiyo qaabkaaga.
Ku dheji qoraal mugdi ah asalka cad. Midabada kale ee jilicsan ayaa laga yaabaa inay shaqeeyaan, laakiin kala duwanaanshuhu waa fure, iyadoo xarfaha ay ka madow yihiin asalka.
Isku day ka weyn, xarfaha si fiican loo qaabeeyey. Waan jeclahay 'Lucida Grande' maxaa yeelay waxay leedahay serifs. Waxaa jira caddayn in dadku wax ku akhriyaan qaab erey, oo aan loo qorin warqad, iyo in serifs ay dhab ahaantii hagaajiyaan awoodda fahamka sii kordhaya.
Isku day inaad kordhiso leylkaaga adoo adeegsanaya CSS si aad u siiso qol ku filan akhristayaasha inay raacaan sadar qoraal ah iyadoon si shil ah uga boodin ama uga dhicin xariiq.
Saami u yeel goobtaada cad si macquul ah. Booska ku yaal dhinac kasta waa inuu u dhigmaa waxyaabaha ku jira. Booska udhaxeeya qoraalada waa inuu ka badnaadaa inta u dhexeysa cinwaanka iyo boostada ay iska leedahay. Noocyada qoraalka ku jira ee ka kooban mawduucyadaadu waa inay ka weynaadaan noocyada ay u kooban tahay astaamaha kale ee kala duwan ee bartaadu leedahay Whitespace waa furaha barta wanaagsan oo akhrisku ku weyn yahay.
Ka faa'iideyso cinwaannada, geesi, jiifta iyo liisaska guntin si sax ah. Maqaal ay ku qoran tahay qoraal geesinnimo leh oo aad loo isticmaalay dhab ahaantii wuxuu ka qaadanayaa waaya-aragnimada wuxuuna khafiifinayaa muhiimadda weedhaha geesinimada leh. U oggolow dadka isticmaala aaladaha ganacsiga si ay ugu fiicnaadaan khibradooda akhris. Liisaska dhawaaqa ayaa bixinaya waxyaabo si fudud loo akhriyi karo. Liistada sidan oo kale ah waxay siisaa akhristaha liis maskaxeed.
Furaha haynta wanaagsan iyo akhriska sii kordhaya ayaa ah awooda akhristayaashaada ay ku xafidan karaan waxyaabaha ay ka heleen bartaada. Qaabkaaga, isticmaalka goobta cad, iyo isticmaalka saxda ah ee qalabka wax lagu qoro waa xubno muhiim ah oo ay tahay inaadan iska indhatirin.
Tags: akhrintala aqrin karocadcad
Sida looga qeyb galo Shirka Blogging $ 2,000 ee $ 49
Ka saarida liiska Blackcast ee Comcast